"Fony tsy mbola azom-pahoriana aho, dia naniasia ; fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho." Salamo 119:67
"Endrey ny hamamin'ny teninao ... Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza !" Salamo 119:103
"Ny teninao no fahamarinana." Jaona 17:17
Ilay mpanoratra rosiana Dostoïevski (1821-1881) dia voaheloka hotifirina noho ireo hetsika revolisionera nataony, kanjo nony farany, nalefa sesitany tany amin'ny tobim-pigadrana iray tany Sibérie izy. Nony tafaverina avy tany izy, niaraka tamin'ilay Testamenta Vaovao nentiny, dia nilaza hoe: «Ho ahy dia mazava ny zavatra rehetra: tsy misy olona tsara kokoa, lalina kokoa, mahatakatra ny manjo kokoa, lavorary kokoa noho Kristy. Tsy misy izany hoe tsara noho Izy izany. Raha sanatria porofoina amiko fa tsy ao anatin'ny fahamarinana Jesosy Kristy, dia aleoko mijanona miaraka aminy, toy izay hitoetra miaraka amin'ny fahamarinana». Jesosy mihitsy no nilaza hoe: "Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14:6).
Teo am-parafara nialany aina dia notakiany ilay Testamenta Vaovao novakiny fatratra tany Sibérie. Nasehony an'ireo zanany io boky kely efa tonta io, ka hoy izy: «Aza misaraka amin'ity boky ity na oviana na oviana ianareo, ary indrindra, aza misalasala na oviana na oviana ny amin'ny fitiavana sy ny famelan-keloka omen'i Jesosy».
Io fijoroana ho vavolombelona io, nataona lehilahy nijaly mafy toy izany, momba ny lanjan'ny bokin'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy, dia miampy amin'ny an'ireo mpino an-tapitrisany avy amin'ny vazantany rehetra, na ireo izay nanana fiainana toa niadanna, na ireo izay nahafoy ny ainy mba tsy handavany ny finoany.
Ny Testamenta Vaovao dia ny fizarana faharoa ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ireo filazantsara izy dia mitantara ny fiainan'i Jesosy Kristy, tonga mba hanafaka antsika amin'ny ota, mba hanokatra ho antsika ny lalana ahazoana fihavanana amin'Andriamanitra. Izay mino ny teniny velona dia mandray ny fiainana mandrakizay.